Mpanamboatra sy mpamatsy fiadiana amin'ny alika | China Dog Harness Factory
Ny fividianana alika oxford azo ovaina dia feno spaonjy mahafinaritra, tsy misy fihenjanana amin'ny tendan'ny alika, endrika mety tsara ho an'ny alikanao izy io.
Ny alika alika oxford azo ovaina dia vita amin'ny fitaovana maherin'ny fofonaina. Izy io dia mitazona ny biby fiompinao mahafinaritra sy mahafinaritra ary mitazona anao amin'ny fifehezana tanteraka.
Ny fihazonana fanampiny eto an-tampon'ity harness ity dia manamora ny fifehezana sy ny fandehanana mafy amin'ny alika mitarika sy antitra.
Ity kofehy alika oxford azo ovaina ity dia manana habe 5, mety amin'ny alika kely sy salantsalany.
Ny fiarovan'ny alika miaraka amin'ny fehin-kibo dia manana faritra feno akanjo lava.
Ny fiarovana ny alika miaraka amin'ny fehin-kibo dia mampihena ny fanelingelenana ny mpamily .Ny fiarovana ny alika dia mitazona tsara ny alikao amin'ny sezany mba hahafahanao mifantoka amin'ny làlana rehefa mandeha ianao.
Mora apetraka sy esorina io fehin-kibo fiarovana alika misy fehikibo io. Apetaho eo ambonin'ny lohan'ny alika izany, avy eo atsofohy izy, ary ahodino ny tadiny araka izay itiavanao azy, apetaho amin'ny fehin-kibo ny fehikibo ary afatory ny fehikibo.
Azo ovaina izy io ary manana buckles plastika mamoaka haingana sy peratra D amin'ny fametahana ny fehin-kibo tafiditra.
Ity amboarin'ny alika nilona ity dia manana habe sy loko isan-karazany isan-karazany. Mety amin'ny karazana alika rehetra.
Rehefa misintona ny alikanao dia mampiasa tsindry malefaka amin'ny tratra sy ny soroka ny alika fanao ho an'ny alika hitarika ny alikanao mankeny amin'ny sisiny ary hampifantoka anao indray ny sainy.
Ny fampiasa amin'ny alika ho an'ny alika dia mijanona ambany amin'ny tratrany fa tsy ny tendany manala ny kenda, mikohaka, ary mikitroka.
Ny fampiasa amin'ny alika ho an'ny alika dia vita amin'ny nylon malefaka nefa mahery, ary manana tadim-borona haingana miorina amin'ny tady kibony izy, mora ny mametraka sy mamono azy.
Ity fampiasa amin'ny alika ity dia manakana ny alika tsy hisintona ny tadiny, mahatonga ny fandehanana hahafinaritra sy tsy misy fihenjanana ho anao sy ny alikao.
Fiarovana amin'ny alika amin'ny alika
Ny alika fampiakarana alika anay dia vita amin'ny fitaovana avo lenta, malefaka be izy io, miaina, mora sasana ary maina vetivety.
Ny alika fampiakarana alika dia hanampy betsaka rehefa miakatra sy midina tohatra ny alikanao, mitsambikina sy mivoaka ny fiara ary toe-javatra maro hafa. Mety ho an'ny alika misy fahanterana, maratra na voafetra ny fivezivezena.
Mora mitafy ity alika fananganana tohana alika ity. tsy ilaina ny dingana marobe loatra, ampiasao fotsiny ny fanakatonana Velcro malalaka & lehibe handehanana / hamonoana.
Tsy misaintsaina ny fiadiana amin'ny alika misintona
Ity harness alika tsy misarika ity dia misy kasety taratra, mahatonga ny biby fiompinao ho hitan'ny fiara izany ary manampy amin'ny fisorohana lozam-pifamoivoizana.
Ny tadiny mora azo ovaina sy ny lamba misy lafiny roa no mitazona ny akanjo milamina amin'ny toerany, manala ny chaffing sy ny fanoherana ny fanaovana akanjo fiarovana.
Ny lambam-pandriana alika tsy misy taratra dia vita amin'ny nilona oxford avo lenta ary miaina. Ka azo antoka, mateza ary kanto.